Sida loo tirtir / masixi Xogta laga drive adag in Windows iyo Mac
Raadinta inay iska iibiso aad PC ama Mac Windows qof kale? Waxaa Haddii ahaan baahida loo qabo in la iibsado qalab cusub ama kaliya lacag, si wanaagsan oo dhan xogta hore iyo hadda jira laga saaro habka aad samayn doonaa. Tani waxay ka hortagtaa si xun u isticmaalka macluumaadka.
Xitaa haddii aadan iibin aad laptop , i t waa wax caqliga leh si ay u tirtiri ama masixi xogta si joogto ah si aad computer ka shaqeeya qaab mug leh. Marka virus ama dhibaato kale oo software la xiriira dhacdaa on your computer, tirtiro xogta fikrad weyn bay ahaan doontaa. Halkan waxaa ku xaaladood marka aad tirtiri karo ama masixi xogta:
Mararka qaarkood, marka aad u ururay badan oo xogta on your computer, waxa uu helo daalid iyo qaab u yareeyaan degree weyn. Masaxaadda ama xogta tirtiro dhakhso your computer ka dhigi kara.
Marka virus qaadsiiyo your computer, khiyaarka kaliya idiinka tegey waa inaan tirtiro xogta ka kombiyuutarka. Tani waxay ka tago doonaa disk adag maadaama ay ahayd cusub.
Wixii dayactir joogto ah oo caafimaadka ee disk adag. Masaxaadda ama tirtiro disk xallin badan ee midnimo iyo arrimo kale oo badan.
Haddii aad raadinayso inaad ku biirto ama la abuuro xijaab cusub, waxa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay tirtirto xijaab qaar on your computer. Tani waxay aad u baahan doontaa in aad masixi wadid aad u adag ka kombiyuutarka.
Haddii ay dhacdo in aad ku rakibidda OS cusub on your computer, waxaad u baahan doontaa in ay masixi OS hore iyo rakibi cusub. Sidaa awgeed, waa in aad masixi xogta jir ah drive adag, si aad kuwa cusub rakibo.
Waxaa jira sabab kale oo badan u tirtiro xogta. Waxaa jira hab yar oo aad u tirtiri karaa labada wadid aad u adag on Windows iyo Mac. Waxaa jira software dhinac saddexaad oo badan oo aad isticmaali karto si masixi xogta laakiin waxba waa sida lagu kalsoonaan karo sida OS laftiisa.
Sida loo tirtiri drive adag hoos daaqadaha?
Windows siinayaa fursado wanaagsan marka ay timaado xogta tirtiro ka your computer daaqadaha. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad had iyo jeer dib ilaa xogta aad ka hor inta aadan ka your computer masixi. Waxaad mar walba isticmaali kartaa software xisbiga saddexaad laakiin daaqadaha ku siinayaa hab amaan ah oo tirtira xogta. Waxaad isticmaali kartaa labada disk rakibo jir ama rakibaadda OS cusub disk in masixi xogta ka your computer.
Waxaad isticmaali kartaa talaabooyinka soo socda si ay u tirtiri ama masixi xogta ka drive adag aad ku saabsan Windows. Waxaad dib u baahan doontaa CD ama daaqadaha CD si ay u tirtiri xogta.
Geli CD ee kombiyuutarka iyo computerka aad. Mid ka mid ah booting waxay ka bilaabantaa waxaad arki doontaa button shaqo ah u galay doorasho boot. Press in button joogto ah marka computer bilaabmin iyo galo doorasho kabaha iyo dooran CD-ROM.
Waa mar kale iyo kabaha ku bilaaban doono ka CD-Rom. On screen soo socda waxaad arki doontaa fursadaha set up kala duwan. Oo weliba waxaa doono liiska cajaladaha ku on your computer. Dooro disk aad rabto inaad ka masixi ka dibna si ikhtiyaar in ay tirtirto ah Barzakh, ee la doortay. Haddii ay dhacdo in ay jiraan wax ka badan hal xijaab, waxaad kale waxay dooran karaan inay sidoo kale u tirtirto.
Hadda dooranayaan NTFS ee drive iyo dooranayaan formatting deg ah ama mid caadi ah.
Waxaa si toos ah qaab doonaa disk oo mar kale dib u bilaabeyso. Hubi in uu jiro nidaamka qalliinka ah on your computer iyo kabaha ka drive in. Fursado yar ayaa laga yaabaa in la beddelo ka OS in OS laakiin tallaabooyinka sii joogi doonaan isla halka tirtiro xogta. Waxaad dib OS cusub ama isticmaal mid ka mid hadda jira si ay u helaan computer aad formatted.
Sida loo masixi drive adag ee Mac?
Tirtiro ama tirtira xog ku saabsan Mac waa la mid, laakiin fursadaha iyo tallaabooyinka waa wax yar oo kala duwan sida ay tahay OS kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, Mac sidoo kale siinayaa fursado hidi-ka data tirtiro ka your computer Mac aad. Sida in daaqadaha, isticmaali dib fursad u horeysay si loo badbaadiyo xog muhiim ah in aad. Idinkuna ma waxaad doonaysaan lumin macluumaadka sababtoo ah waxa ay noqon karaan wax aan macquul aheyn inuu ka soo kabsado xogta ka dib waxaa la helay laga masaxayo kombiyuutarka.
Waa kuwan tallaabooyinku aad raaci karaan si ay u tirtiri ama masixi drive adag ka Mac.You u baahan doonaa disk rakibidda OS ka qaban tirtiro.
Geli disc kaa gelin doonaa Mac oo guuleysatey. Marka la xirey kadibna computer dhawraan C u riixriixan oo ilaa logo ee Apple muuqataa.
Marka screens cusub soo booda, dooro doorashada ku haboon. Si aad u masixi dooro Macintosh HD mugga oo taga si ikhtiyaar badhanka hoose. Dooro in masixi iyo rakibi OS nadiif ah nidaamka qalliinka.
Tani waa sida ugu wanaagsan oo ugu fudud in ay tirtirto disk on Mac. Kadib markii geedi socodka, your computer la billaabeen doono iyo waxa ay noqon doontaa rakibidda cusub halkan ka, waxaad u baahan doontaa in aad soo celin xogta asalka on your computer ka gurmad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa ogalaanshaha maamulka ka hor inta aadan isbeddelkan sameeyaan. Sidaa awgeed, awood user Root in ay oggolaadaan in aad isbedel si.
Labada hababka waa sahlan oo si fudud loo. Hubi in aad dib xogta aad leedahay iyo in loo isticmaalaa cajaladaha OS rakibo asalka ah si ay u sameeyaan habka siman.
Sidee inuu ka soo kabsado files ka formatted Hard Drive?
Sidee inuu ka soo kabsado xogta lumay ka NTFS Hard Drive?
Sida loo dayactir Hard Drive gaabinta & shil
All ku saabsan Barzakh Hard Drive Recovery iyo Soo-kabashada ah Barzakh,
Dhammaan Tools Hard Drive Recovery Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka cajaladaha Iomega Hard
> Resource > Hard Drive > Sida loo tirtir / masixi Xogta laga drive adag in Windows iyo Mac